Xanuun uu Maraykanku garan la’yahay oo ku dhacay nin jaajuus ah oo dalkaa u dhashay! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Xanuun uu Maraykanku garan la’yahay oo ku dhacay nin jaajuus ah oo...
Xanuun uu Maraykanku garan la’yahay oo ku dhacay nin jaajuus ah oo dalkaa u dhashay!
(Hadalsame) 22 Sebt 2021 – Sarkaal ka tirsan CIA-da oo u safrayay Hindiya bishan isaga iyo agaasimaha hay’adda ayaa laga soo sheegay astaamo la xiriira xanuunka Havana syndrome, oo maskaxda saameeya, sida ay ku warrantay warbaahinta Mareykanka.
Saddex ilo wareed oo aan la magacaabin ayaa warbaahinta Mareykanka u sheegay in sarkaalka uu helay daryeel caafimaad oo ku saabsan cudurka qarsoon.
CIA -da kama aysan jawaabin codsiyada cidsi ay u dirtay BBC-da ay uga hadlaan arrintan.
Waa kiiskii labaad ee la soo sheego muddo bil gudaheed ah, iyadoo mas’uuliyiinta Mareykanka ay sii wadaan baaritaanka sababta keentay.
Bishii Ogosto, duulimaadkii Madaxweyne Ku -xigeenka Kamala Harris oo ka yimid Singapore kuna sii jeeday caasimadda Vietnam ee Hanoi ayaa muddo kooban dib loo dhigay kadib markii sarkaal Mareykan ah uu soo sheegay astaamo muujinaya cudurka Havana syndrome.
Qoraalka sawirka, Xanuunkan mid u eg ayaa horay loogu arkay diblomaasiyiinta Mareykanka ee Cuba
Previous articleDaalibaan oo magacowday danjirihii ugu horreeyey ee caalamka ku meteli doona
Next articleSaamaynta xun ee uu khilaafka Farmaajo & Rooble ku yeeshay ganacsiga Muqdisho (Dhegeyso)